दिल्लीमा जोर–बिजोरको ढोंग
वि.सं २०७७ कार्तिक ८ शनिबार
तवलिन सिंह काठमाडाैं
२०७६ कार्तिक ६ बुधबार ०८:४६:००
दिल्लीको यस्तो अवस्था किन छ, जहाँ प्रत्येक वर्ष हामीले जोर–बिजोरको तमासा भोग्नुपर्छ, जब कि यो उपाय होइन, ढोंग मात्रै हो
प्रत्येक वर्षझैँ यसपटक पनि जाडो सुरु हुनासाथ दिल्लीको हावाका विषयमा चिन्ता सुरु हुन थालेको छ । तिहारपछि दिल्ली सरकारले फेरि पनि ‘जोर–बिजोर’ प्रणाली सुरु गर्दै छ । जोर दिन अन्तिममा जोर अंक भएका सवारी र बिजोर दिन अन्तिममा बिजोर अंक भएका सवारी मात्रै सडकमा गुड्न पाउनेछन् । तर, यो समाधानको उपाय होइन, देखावटी मात्रै हो । वास्तविक विकल्पबारे न दिल्ली सरकारले कुनै चिन्तन गर्‍यो, न त भारतको केन्द्र सरकारले । जबकि, यसका अनेक उपाय छन् ।
यस मौसममा वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारण पन्जाब र हरियाणाको खेतमा जलाइने पराल रहेको बताइन्छ । किसानहरू पराल जलाउन किन बाध्य छन् भने त्यसको विकल्पमा सरकारले उनीहरूलाई कुनै सहयोग गरेको छैन । पन्जाब सरकारले रेडियोमार्फत किसानलाई पराल नजलाउन बिन्ती गर्छ, तर यो झुटो प्रयास हो । उत्तर भारतमा वायु प्रदूषणको समस्या अब निकै गम्भीर भइसकेको छ । त्यसैले यसको समाधानका विकल्प पनि झारा टार्ने खालको भएर हुँदैन । हामीले यसका गम्भीर उपायहरूमा छलफल गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
कस्तो लाग्छ भने पर्यावरणलाई लिएर हाम्रा राजनेता गम्भीर र चिन्तित छैनन् । कसौली यसको एउटा उदाहरण हो । ‘खुसवन्त सिंह लिटफेस्ट’मा भाग लिन म पहिलोपटक कसौली गएकी थिएँ । त्यस सहरको अवस्था देखेर मलाई साँच्चै रुन मन लाग्यो । कसौलीमा पर्यटक यति धेरै बढे कि सहरको हरेक दोस्रो कुनामा एउटा नयाँ होटेल स्थापित हुन पुग्यो । यी होटेलको निर्माण भ्रष्ट अधिकारीलाई घुस खुवाएर गरिएको छ, किनभने यसले पहाडलाई प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सान पु¥याएको छ, जसको भरपाईका लागि कुनै प्रयास भएका छैनन् ।
जब कुनै अविकसित देश विकासको मार्गमा अघि बढ्छन्, तब पर्यावरणको नोक्सान त हुन्छ नै । अर्कोतर्फ, जुन देशको सरकारले बुद्धिमतापूर्वक काम गर्छ, त्यहाँ सुनियोजित ढंगले विकास आउँछ ।
यति लापर्वाहीसाथ पहाडलाई चिथोरेर विकास आएको छ कि यसले जहिले पनि पहिरोलाई निम्त्याउन सक्छ । अझै उदेकलाग्दो के छ भने पहाडलाई ध्यान दिनुको सट्टा सडक चौडा गर्नेतर्फ सबैको ध्यान गइरहेको छ । जब कुनै अविकसित देश विकासको मार्गमा अघि बढ्छन्, तब पर्यावरणको नोक्सान त हुन्छ नै । अर्कोतर्फ, जुन देशको सरकारले बुद्धिमतापूर्वक काम गर्छ, त्यहाँ सुनियोजित ढंगले विकास आउँछ । जब प्रत्येक वर्ष देशको राजधानीमा बग्ने हावामा सास फेर्न अप्ठेरो हुन्छ, त्यतिवेला यो समास्याको समाधान खोजिनु जरुरी हुन आउँछ, जसले दीर्घकालीन विकल्प देओस् ।
दिल्लीमा यस्तो किन हुन सकेन ? जबकि, हामीसँग पराल जलाउने आधुनिक विकल्प पनि छ । हरियाणा, राजस्थान र पन्जाबका किसानलाई यस्तो विकल्प किन उपलब्ध गराइएन ? दिल्लीको यस्तो अवस्था किन छ, जहाँ प्रत्येक वर्ष हामीले जोर–बिजोरको तमासा भोग्नुपर्छ । जबकि, यो उपाय होइन, ढोंग मात्रै हो ।
पर्यावरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूपमा निकै गम्भीर छन् र उनले यस विषयमा पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनले देशका अधिकांश राजनेताले पानी र वायुमा कुन हदसम्म नोक्सानी पुर्‍याएका छन् भनेर किन सम्झन सकेका छैनन् । अब पनि देखावटी कामले हुन सक्दैन । अन्त्यमा, उत्तरतर्फबाट जब म दिल्ली फर्कंदै थिएँ, मैले बाटोमा एउटा ठूलो पहाड देखेँ । यसले मलाई छक्क पार्‍यो । दोस्रोपटक नियालेपछि थाहा भयो कि यो फोहोरको डंगुर रहेछ । जसले महानगरको हावामा दैनिक विष फैलाइरहेछ ।
#दिल्ली # जोर–बिजोर # तवलिन सिंह
आइपिएल : मुम्बई र दिल्लीबीच शीर्ष स्थानमा जुहारी
आइपिएल : दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्लियो
आइपिएल : दिल्लीले बेंग्लोरलाई ५९ रनले हरायो
दिल्ली शीर्ष स्थानमा, कोलकाता १८ रनले पराजित
आइपिएल : हैदराबादले दिल्लीलाई १५ रनले हरायो
विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोर–बिजोर प्रणाली अपनाएर पठनपाठन
प्रहरी नेतृत्वसँग जवान–हवल्दारका ८ गुनासा : बिदा नपाउने मात्र होइन, हाकिमको दुर्व्यवहार पनि
ओलीको हठले नेकपा विघटनको डिलमा
नेकपा कर्णाली विवाद : ओली र प्रचण्डका भिन्दाभिन्दै लिखित निर्देशन
अंग्रेजी शिक्षाको हाउगुजी
चेन्नई सुपर किंग्सको लज्जास्पद हार, मुम्बई इण्डियन्स १० विकेटले विजयी
कोरोना कहर : हाँसको व्यापारमा पनि असर
इस्मा गाउँपालिकाद्वारा ठूलो परिमाणमा मदिरा बरामद
माटो खन्दा ढिस्कोले पुरिएर दुई महिलाको मृत्यु, घाइते दुईको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
सामाजिक न्यायको प्रयास : खिजिकातीमा एकल पुरुषलाई पनि मासिक भत्ता
सुन्धारामा रहेको मस्जिदमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड, वडाध्यक्षकै संलग्नतामा भूमाफियाले भत्काएको वडासदस्यको आरोप